Waa sidee xaaladaha nolosha dadka reer Qaza? | Saxil News Network
Qaza waxay hoy u tahay 1.9 milyan oo qof,dheerarka dhulkana waa 41 kilomitar, waxaana ku hareeraysan badda Mideterranean-ka, waxayna xad la wadaagta Masar iyo Israa’iil.
Horraan Qaza waxay ahayd dhul ka tirsan Masar, Israa’iil ayaa sanadkii 1967-diiqabsatay marinka Qaza xilliggaasi uu socday dagaalkii bariga dhexe.
Markii ay tallada la wareegeen Ururka Xamaas, Israa’iil waxay go’doomiisay Marinka Qaza taaso saamayn ku yeelatay isu socodka dadka iyo badeecadaha gobolka. Masar waxay xirtay xadka ay la wadaagto marinka Qaza.
Image captionilla wakhtigii ay maamulka qabsadeen ururka Xamaas sanadkii 2007-diii, Masar waxay xirtay xadka Qaza ay la wadaagto
Israa’iil oo duqayn ka fulisay Qaza
Image captionQodadka laga qoday dhulka hoostiisa ee dhanka xadka Masar ayay badeecadaha soo marsadaan
Bangiga adduunka ayaa intaasi u daray in shaqo la’aanti ugu baahnayd ay ka jirto halkaasi boqolkiiba 44 ay heerka shaqo la’aanta ay gaartay.
Image captionCarruur badan oo reer Qaza waxay waxbarasho u aadan Iskuul ay gacanta ku haysa Qaramada Midoobay
Qaza waxaaa burburiyay dagaalkii sanadkii 2014-kii ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa’iil, waxaana la rumaysan yahay in 29,000 qof ay guryahooda ka barakaceen.
Qaza waxay kamid tahay goobaha ugu badan ay dalinyarada ku nool yihiin adduunka boqolkiiba 40 dhalinta halkaasi waxay ka hooseeyaan da’da 15 sana.
Image captionKoronto la’aan ayaa saamaysay magaalada Qaza.
Daawada iyo tasiilaadka caafimaadka ayaa noqday gabaabsi kaddib markii la go’doomiyay marinka Qaza.
Image captionKalluumaysiga Qaza
Go’doominta Israa’iil ee marinka Qaza ayaa saamayn ku reebay beeraha iyo kalluumaysiga.
Image captionMugdi iyo karonto la’aan ayaa maalinkii ka jira Qaza
Korontada la’aanta waa arrin maalin kasta caadi ka ah marinka Qaza, inta u dhexeeysa 3 saacadood illa 6 saac ayay koronto helaan reer Qaza maalin kasta.
Inta badan waxay korontada Qaza ka heshaa Israa’iil iyo koronto yar ay ka hesho Masar.
Baaritaan lagu hayo Fiidiyowga ‘Askar tooganaysa qof Falastiini ah’
Image captionBulaacadaha ayaa saamayn ku reebay Qaza gaar ahaan xilliga roobabka
Qaza kama da’aan roobab badan, mana jiraan biyo badan oo dabooli kara baahida dadka.
Waxaa laga cabsi qabaa in bulaacadahani ay ku daadaan waddooyinka Qaza taaso dhibaata caafimaad ku reebi karta shacabka ku nool magaaladaasi